शिक्षा क्षेत्रलाई दलालहरूकाे पञ्जाबाट मुक्त गर्नेबारे - Left Review Online
देश निर्माणमा शिक्षाको महत्त्व
विद्यालय भनेको बुद्विको विकास गर्ने अति राम्रो कारखाना हो । यस्तो राम्रो कारखाना नै दलालको कब्जामा परेपछि देशको जहाज डुब्छ ।
शिक्षा र विद्यार्थी
शिक्षा ज्ञानको पहिलो खुड्किलो हो । शिक्षा मानिसको इज्जत प्रतिष्ठा प्राप्त गर्ने आधार हो । शिक्षा प्राप्त गर्नका लागि विद्यालय जानुपर्छ । सुन, चाँदी, हिरा, मोती, रुपैया–पैसा धेर थोर जसका घरमा पनि पाइन्छ, पाउन सकिन्छ तर शिक्षा जहाँसुकै पाउन सकिदैन । त्यसैले शिक्षा प्राप्त गर्नका लागि विद्यालयमा जानु पर्छ, बालबालिकालाई विद्यालय पठाउनु पर्छ । विद्यालयमा शिक्षक, अभिभावक विद्यार्थीहरुको एउटा परिवार हुन्छ ।
एउटा प्रतिभावान विद्यार्थी देशको सम्पत्ति हो । विद्यार्थी भन्ने शव्द अंग्रेजी वर्णमालाको सात वटा अक्षरहरुले बनेको हुन्छ । विद्यार्थी आर्थात् STUDENT ।
S – Sensitive संवेदनशील,
T – Thoughtful चिन्तनशील,
U – Understanding समझदार,
D – Desirous इच्छाशक्ति भएको,
E – Effectful प्रभावशाली,
N – Normal साधारण,
T – Talent तिक्ष्ण बुद्वि भएको ।
यी माथिका सातवटै गुणहरु सवै विद्यार्थीहरुमा हुन्छन् । यी गुणहरुको पूर्णताको माध्यम शिक्षकहरु हुन् । विद्यालय विद्याको मन्दिर हो भने असल शिक्षकहरु शिक्षा र ज्ञान दाताहरु हुन् ।
शिक्षा प्रत्येक मुलुकको रक्तसञ्चार हो । शिक्षा भनेको मानवको चेतनाको विकास गर्ने माध्यम हो । कसै कसैले मानव चेतनालाई उसको भित्री आँखा भन्ने गर्दछन् । असल काम गर्नका लागि मानव जातिको भित्री अाँखा खोल्नु पर्छ ।
गरिबी र उत्पीडनका कारणले हजारौँ बालबालिकाहरु शिक्षाबाट बञ्चित हुने गरेका छन् । शिक्षाबाट बञ्चित भएपछि उनीहरु भोक, रोग, बेराेजगारी र अभावको शिकार बन्दछन्, जसले उनीहरुलाई विद्रोही र कहिलेकाहीँ अराजक पनि बनाउँछ ।
शिक्षाको अभावमा मानिसले आफ्नो समस्या आफै पहिचान गर्न र त्यसको समाधानको बाटो पहिल्याउन सक्दैन । उसलाई जीवन व्यवहारमा सही र गलत छुट्टयाउन पनि गाह्रो हुन्छ ।
कुनै पनि राम्रो कामका लागि ज्ञान आवश्यक पर्दछ र ज्ञान प्राप्त गर्ने मुख्य माध्यम शिक्षा नै हो । त्यसैले देश निर्माणमा ज्ञानको पहिलो स्थान हुन्छ, जसको आधार शिक्षाले तयार गर्दछ ।
शिक्षकहरुः अन्धकारका बत्ति
यसरी विद्यालयबाट ज्ञानको आधार तयार गर्ने शिक्षकहरु समस्त मानव जातिका सम्मानित मित्र शक्तिहरु हुन् । व्यवहारिक रुपमा मानिसहरुको जीवनमा अरुको भलाइ चाहनेहरुमा आफ्नोभन्दा सन्तानको धेरै सुख चाहने मातापिता पछि आफूभन्दा आफ्ना विद्यार्थीहरुले धेरै जान्ने सुन्ने र योग्य मान्छे बनून् भन्ने चाहना राख्ने शिक्षकहरु हुन् । त्यसैले प्राचीन ग्रन्थहरुमा मातापिता र शिक्षकहरुलाई देवतासँग तुलना गरेको पाइन्छ ।
सबै शिक्षकहरुले सँधै एउटा मूल मन्त्र बोकेर हिँड्नु पर्छ ।
शिक्षक हामी देशका,
डाक्टर, नेता, चित्रकार
महान् विद्वान, साहित्यकार
जन्माउने हामी यो देशका ।
यस्ता शिक्षकहरु समाजमा आदरणीय हुनुपर्छ र हामी सबैले असल शिक्षकहरुको सम्मान गर्नुपर्छ ।
शिक्षकहरु अन्धकारका बत्ति हुन् । यति धेरै महत्त्व बोकेको शिक्षण पेसामा भेदभाव छ । शिक्षण पेसामा पद धेरै भएः स्थायी, नीजि, राहत, अस्थायी र पिसिएफ आदि । यसमा स्थायी मात्र शिक्षक अरु सबै खेताला, खेताला पनि धनी बिनाका खेताला जस्तो अवस्था छ ।
हामीले विद्यालय शिक्षाको गुणस्तरको आशा राख्छौँ भने शिक्षकहरु पुरै स्थायी हुनुपर्छ । उनीहरुलाई आवश्यक सेवा र सुविधाहरु प्रदान गरिनुपर्छ । विद्यालयहरुलाई समेत आवश्यक पूर्वाधारहरु र सेवा/सुविधाहरु प्रदान गर्नुपर्छ । प्रत्येक विद्यालयमा कम्पाउण्ड घेरिएको हुनुपर्छ । विद्यालय शान्ति क्षेत्र घोषित हुनुपर्छ । शिक्षकहरु छनौट गर्दा हाम्रोलाई होइन, राम्रोलाई हेरिनुपर्छ । शिक्षामा नातावाद लागु हुनु हुँदैन, योग्यता र क्षमतालाई हेरिनु पर्छ ।
अस्थायी शिक्षकको पीडालाई बुझ्नै पर्ने हुन्छ । ऊ ६० वर्ष पूरा भएर विद्यालयवाट विदा हुँदा आफ्ना सहकर्मी शिक्षक साथी र विद्यार्थीसँग खालि हात र चाउरी परेको अनुहार लिएर घर फर्कनु पर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ । एउटै विद्यालायभित्र पढाउने शिक्षकहरु बिचको यो अन्तर शिक्षकहरुको बिचमा गरिने भेदभाव नै हो र यो कम्युनिस्ट सरकारका शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल ज्युकाे पालामा हट्नु पर्छ । यो भेदभाव हटेपछि शिक्षामा पक्कै पनि सुधार आउँछ । अर्को पाटो खराब प्रवृति भएका शिक्षकलाई सँजाय दिन डराउनु हुदैन । अहिलेसम्म भएको यसको अभाव छ ।
शिक्षाः मानव विभेद अन्त्य गर्ने साधन
मानव समाजमा भएको विभेदलाई हटाउने मुख्य कडीको मुख्य पाटो र पहिलो साधन नै शिक्षा हो । शिक्षाको स्तर उकास्न र गुणस्तरीय शिक्षा लागि मातृभाषामा ध्यान दिनुपर्छ । माथि नै भनिसकिएको छ कि कक्षा १ देखि ५ सम्मको विद्यार्थीहरु भाग्नुको कारण भाषाको कठिनाईले गर्दा हो । कुन भाषा बोल्ने विद्यार्थी धेरै छन् । सोही मातृभाषामा कक्षा सञ्चालन गर्नुपर्छ र प्रा.वि.मा शिक्षक छनोट गर्दा त्यस विषयलाई ध्यान दिएर शिक्षक छनोट गर्नुपर्छ । यो उत्तम बिकल्प हुने छ ।
बच्चालाई आमाको मातृभाषामा शिक्षा दिनुपर्छ । बच्चाको पहिलो पाठशाला आमाको काख हो । आफ्नो संस्कृति र आफ्नो भाषा भनेको देशभित्रको आफ्नोपनको सुन्दरता हो । आफ्नो पहिचान सबैलाई प्यारो लाग्छ । आफ्नो पारिवारिक विकास आफैले गर्ने हो ।
शिक्षामा पछि परेका जात–जातिहरुलाई माथि उकास्न र सैद्वान्तिक रुपमै अघि बढाउन उसको रहनसहन चालचलन संस्कृतिबाट अघि बढाउनु पर्छ । उसको आर्थिक जग कस्तो छ, त्यहीँबाट उकास्नु पर्छ । उसको परम्परागत सामाजिक अवस्थादेखि कै शिक्षामा अगाडि बढाउन सकियो भने जगैदेखि राम्रो हुँदै आउँछ ।
बच्चादेखि नै समाज र देशप्रतिको विकासको भावनालाई समेटिँदै आउँछ र बल्ल भित्रैदेखि ‘यो देश मेरो हो, यो देश बनेपछि हाम्रो भविष्य बन्छ’ भन्ने भावना जाग्छ । बल्ल देश समृद्धि तिर लम्कन्छ । देशको समृद्धिका लागि शिक्षा अनिवार्य छ । शिक्षाले मात्र मानिसको जीवनलाई जगतको दर्शनसँग जोड्न सक्छ ।
संस्थागत रुपमा नेपालको शिक्षा मन्त्रालय २००७ सालमा स्थापना भएको हो । सात दशकसम्म शिक्षा क्षेत्रले गर्न नसकेको उन्नति र प्रगति वर्तमान नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयले छोटै समयमा गरेर देखाउनु पर्ने आवश्यकता छ । यो संभव पनि छ । यसमा कुनै द्विविधा आवश्यक छैन । शिक्षा मन्त्रालयको टिमले त्यो गर्न सक्छ, गर्न सकिन्छ । असंभव भन्ने शव्द त मुर्खको डायरीमा मात्रै हुन्छ ।
सामुदायिक विद्यालय नेपाल सरकारको अनुदानमा सञ्चालित छ । निःशुल्क किताब पाइन्छ, फि लाग्दैन, तालिम प्राप्त शिक्षक र विषयगत शिक्षकको पनि व्यवस्था छ तर पनि विद्यालयले शिक्षण सिकाइमा गुणस्तर दिन सकेको छैन ।
हामीले सामुदायिक विद्यालयमा सुधार ल्याउन कम्तिमा तीनवटा विषयमा तत्काल ध्यान दिनु आवश्यक छ । शिक्षाको गुणस्तर, विद्यार्थीको स्वास्थ्य र खानेपानी तथा सरसफाई । यी तीन कुराको तत्काल व्यवस्था हुनुपर्छ ।
शिक्षा मन्त्रालयको काम विद्यालयको भवन, विद्यालयको खेलमैदान र बाल बच्चाको खेल्ने सामानहरु उपलव्ध गराइदिने एवम् पढाइलेखाई सम्बन्धि अरु के–के कुराहरुको समस्या छ ? कति–कति दुरीमा विद्यालय हुनुपर्ने हो ? एक जना शिक्षक बराबर कति जना विद्यार्थी हुनुपर्ने हो ? त्यसको मापदण्ड तोकिदिने । यी शिक्षा मन्त्रालयका काम हुन् । शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउन शिक्षा मन्त्रालयवाटै नियम कानुन बनाइनु पर्छ । त्यस्तै बालकक्षाको व्यवस्था मिलाई पढाइको स्तर अनुसार कक्षा १ मा पुग्ने उमेर तोकिनुपर्छ । शिक्षाको स्तर उकास्न र गुणस्तरीय शिक्षाको विकास गर्न तल्लो तहबाट नै सुधार गर्नुपर्छ ।
सामुदायिक विद्यालयको पढाइ नराम्रो होइन, तर त्यहाँ पढाइका लागि आवश्यक वातावरण र परिस्थिति छैन, त्यसको जग नै छैन । विद्यालयमा प्रवेश गरेकै दिन कक्षा १ मा पुग्छ । कक्षा ५ मा पुग्दासम्म पनि अक्षर राम्ररी पढ्न जान्दैनन् । यसकारण सरकारी विद्यालयका पढाइ कमजोर भएको छ । असुविधा पनि उस्तै दुःखदायी छन् । कम्पाउण्ड छैन । बच्चाहरुका लागि साँगुरो त्यो पनि फोहोर चौरदेखि बाहेक खेल्ने सामान केही पनि छैन । भोकाउँछन्, टिफिनको केही पनि व्यवस्था छैन । चर्पी छ, पानीको व्यवस्था छैन ।
आफ्ना सन्तानलाई शिक्षा दिने विषयमा विपन्न वर्गलाई साह्रै संकट छ, धेरै कठिनाई छ । यसमा नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयले बुझ्न आवश्यक छ । जनतालाई कसरी शिक्षित पार्ने हो भनेर उपाय खोजेर सुरुवात गर्नुपर्छ । विद्यार्थी विद्यालयवाट भाग्नुको मुख्य कारण भाषाको कठिनाइले गर्दा हो । कक्षा १ दखि कक्षा ५ सम्मको विद्यार्थी विद्यालयवाट भाग्ने गर्दछन् । यो समस्याको समाधान गर्ने जिम्मा नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयकै हो । यसको समाधान गर्ने नेपाल सरकारले नै हो ।
सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षाकाे गुणस्तर खस्किनुकाे एउटा मुख्य पाटो अनुगमनकाे अभाव हाे । नयाँ संविधान २०७२ घोषणा भएपछिको पहिलो शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल ज्युद्वारा १८ बुँदे प्रतिबद्वता पत्रमा उल्लेख भए बमोजिम अनुच्छेद नं. ५ मा कठोर अनुगमन गरिने कुरा उल्लेख थियो । सरकारबाट बाहिरिनु परेको कारणले त्यतिबेला सो कुरा लागु गर्न सकिएन । अब फेरि दोहोराएर मन्त्री बन्ने मौका मिलेको छ, एउटा सुअवसर प्राप्त भएको छ । यतिबेला त्यो कडाइकासाथ लागु गरिनुपर्छ ।
अनुगमनले शिक्षकलाई अनुशासित बनाउँछ । अनि सामदुायिक विद्यालयमा पुरै सुधार आउँछ । शिक्षामा सुधार आउनासाथ विद्यार्थीहरुमा सिक्ने प्रक्रियामा विकास हुन्छ । संसारमा सबैभन्दा प्यारो चिज आफ्नो सन्तान हो । त्यसैले विद्यार्थीहरुको सिकाई राम्रो भएमा विद्यार्थीलाई त फाइदा हुन्छ नै अभिभावकहरु पनि खुशी हुन्छन् ।
नीजि शिक्षा र शिक्षाको व्यापारः
सामुदायिक विद्यालयहरुको शिक्षामा गुणस्तर दिन सके नीजि विद्यालयको आवश्यकता नै रहँदैन । विद्यालय भनेको बौद्धिक क्षेत्र भित्र पर्दछ । बुद्विलाई भत्काउन बुद्वि नै चाहिन्छ । बल प्रयोग गरेर घाटा मात्र हुन्छ, नाफा हुँदैन ।
नीजि विद्यालय धनी (पुँजीपति) र विद्वान (शिक्षक) मिलेर सञ्चालन गरेका हुन्छन् । त्यसमध्ये कति त सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने शिक्षकहरु समेत छन् । नीजि विद्यालयका सञ्चालकहरुले निजी विद्यालय आफ्नो र सरकारी विद्यालय अर्काको ठानेर सञ्चालन गरेको हुन्छ ।
उनीहरुले निजी भनेको निजी नै हो भन्न पनि पाउँछन् । तर सरकारले यो निजी हो, यो हाम्रो होइन भन्न पाउँदैन । यसो भन्दा अन्याय हुन्छ । त्यसैले यस्तो तरिका अपनाउनु पर्छ ता कि साँप पनि मरोस्, लठ्ठी पनि नभाँचियोस् । अर्थात् सामुदायिक विद्यालयहरुको शिक्षामा गुणस्तर आओस् र नीजि विद्याालय आफै बन्द हुन् ।
नेपालमा झण्डै सात दशकदेखि सञ्चालित सरकारी विद्यालय, २००७ सालमा स्थापना भएको शिक्षा मन्त्रालय । यति लामो समयसम्म पनि सामुदायिक विद्यालयहरुले राम्रो र गुणस्तरीय शिक्षा दिन नसकेको कारणले गर्दा नै निजी विद्यालयको जन्म भएको हो ।
निजी विद्यालयको जन्म हुदाँहुँदै यसले नीजि शिक्षाको रुप लियो र क्रमिक रुपमा शिक्षा क्षेत्र नै व्यापारतिर गयो । यो व्यापार हुदाँहुदै फेरि पूरै दलालहरुको कब्जामा परेको छ । सरकारी विद्यालयले गर्न नसकेको काम नीजि विद्यालयले गरेका छन् भन्दै दलालहरुले शिक्षाको निजीकरणलाई मलजल गरिरहेका छन् । विद्यालय भनेको बुद्विको विकास गर्ने अति राम्रो कारखाना हो । यस्तो राम्रो कारखाना नै दलालको कब्जामा परेपछि देशको जहाज डुब्छ ।
शिक्षा क्षेत्रलाई दलालको कब्जावाट फिर्ता लिन सक्ने भनेको बामपन्थीहरुले हो, कम्युनिस्टहरुले हो । यसले हाम्रो देशमा दलाल पुँजीवादलाई कमजोर गराउन पनि ठूलो भूमिका खेल्नेछ । यस विषयमा शिक्षा मन्त्रालय र नेपाल सरकारले चनाखो हुन आवश्यक छ ।
यो सरकार बामपन्थी सरकार हो । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेता शिक्षा मन्त्री हुनुहुन्छ । गाउँघरको भाषामा भन्दा मन्त्री भनेको त जनताले जप्ने मन्त्र जस्तै हो । अहिलेको अवस्थामा शिक्षा मन्त्री ज्युले चाहँदाखेरि धेरै कुरा गर्न सक्नु हुन्छ । प्रदेश, जिल्ला र स्थानीयस्तरलाई पनि परिचालन गरेर धेरै काम गर्न सकिन्छ । स्थानीय निकायमा गाउँपालिका र नगरपालिकाले पनि धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछन् । अब संघीय मन्त्रीज्युले ठोस निर्देशन मात्रै दिँदा पनि धेरै कुरा संभव छ । हामी सबै सरकारको साथमा छौँ ।
यो पनि पढ्नुहोस्ः अमेरिकीहरू धेरै पढेलेखेका हुँदैनन् – फिडेल क्यास्ट्रो
यो पनि पढ्नुहोस्ः क्रान्तिकारी नैतिकता – क. हो ची मिन्ह
यो पनि पढ्नुहोस्ः कोरियाली बाल सङ्गठन र समाजवादी देशका सच्चा सपूतहरू – मार्शल किम जोङ उन
२०७५ जेठ ६ गते ।
चैनपुर न.पा. वडा नं. ६, संखुवासभा ।
(भण्डारी संविधान सधाका पूर्वसभासद् हुनुहुन्छ – सम्पादक ।)
पछिल्लाे - पार्टी एकताकाे ऐतिहासिक औचित्य छ – क. प्रचण्ड
अघिल्लाे - Story ofaGirl